Madaxweynaha Turkiga iyo Madaxweynaha Ruushka oo maanta wada hadal yeelanaya – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha dalkaTurkiga Recep Tayip Erdogan ayaa wadahadal kula yeelan doona magaalada Moscow dhiggiisa madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin waxaana uu sheegay in uu doonayo in uu dib u soo celiyo xiriirka Rassia.
Labada hogaamiye ayaa wadahadalladooda maanta waxaa ay diiradda ku saari doonaan soo celinta xiriirka dhanka ganacsiga,maalgashiga iyo dib u soo celinta dalxiiska.
Waa markii ugu horeysay oo Mr Erdogan uu dalka dibadiisa u ambabaxo tan iyo intii ka danbaysay isku daygii afgambigii fashilmay ee 15kii july ka dhacay dalkaasi.
Xiriirka labada dal ayaa xumaaday kadib markii Turkigu ku soo rideen xadka ay la wadaagaan Siiriya diyaarad dagaal oo Raashiya leedahay,arinkaasi oo gaarsiiyay heerkii ugu xumaa xiriirka labada dal.
Bishii Juun ayaa aqalka Kremelinka oo looga taliyo dalka Raashiya waxaa uu sheegay in madaxweynaha dalka Turkiga uu raaligalin ka bixiyay dhacdadaas, isla markaana tacsi u direy ehelada duuliyeyaashii diyaaradaas.
“Booqashadani waxaa ay iiga dhigan tahay calaamad muujinaysa xiriirka labada dhinac oo markale dib u bilaabanay,” ayuu yiri Madaxweyne Ordagan.
Golaha Ammaanka oo meel mariyay in ciidan la geeyo Koofurta Sudan
40 ruux oo lagu dilay Qarax Ismiidaamin ah oo lala eegtay Isbitaal ku yaal Pakistan (Daawo Sawirada)